Samsung gosipụtara mgbawa 5G ọhụrụ ya, Exynos 880 | Gam akporosis
Samsung kwupụtara ọnụ Exynos 880 dị ọnụ ala na 5G
El Samsung ọhụrụ Exynos 880 mgbawa na 5G Ọ na-abịa ka anyị nwee ike ịhọrọ teknụzụ na teknụzụ ahụ na-enweghị ụgwọ ọ bụla dịka ọ na-eme na Snapdragon na nke ahụ na-eduga na mmụba nke ekwentị.
Onye anyi nwere nke a Samsung ọhụrụ mgbawa pụtara na anyị họọrọ maka a ala na-eri mgbawa a ga-ewebata ya na ụfọdụ smartphones dị ka Galaxy A71 5G na A51 5G. Otu ozi dị mkpa dịkwa n'ihi na Samsung na-etinye batrị n'okwu nke ndị nhazi.
Exynos 880 nwere myirịta ole na ole na nkọwapụta ya na 980. O nwere otu isi na ụdị mgbawa, n'agbanyeghị na elekere dị iche, ha bụ 2x 2.0GHz Cortex-A77 na 6x 1.8GHz Cortex-A55, otu GPU na Mali-G76 na ihe otu modem.
Ebee ka ọdịiche dị na Wi-Fi, mkpebi ihuenyo dị na ese foto. Full HD + mkpebi nke 2520 × 1080, nhazi nke igwefoto ruo 64MP na Wi-Fi 5 kama 6. detailsfọdụ nkọwa ndị ọzọ nke mgbawa Exynos 88o ọhụrụ a bụ 8nm ya, nkwado maka nchekwa LPDDR4x, UFS 2.1 ma ọ bụ eMMC 5.1 nchekwa na ihe ndi ozo di ka Bluetooth 5.0, nkwado maka redio FM, GPS na ihe ndi ozo.
Na nkenke, enweghi mmụba dị ukwuu na arụmọrụ ma e jiri ya tụnyere ibe ndị gara aga, mana ee ọ dị mkpa iburu n’obi na ọ bụrụ na ọ dabara na ezigbo ego ya nwere ike ịbụ ihe na-adọrọ mmasị. Anyị enweworị mkpanaka nke ga-abịa na mgbawa a: Vivo Y70 na nke ahụ agaghị agafe 280 $. Na maka smartphone nwere 5G adịghị njọ.
Ihe akara aka nke Exynos 880 mgbawa a doro anya nakwa na n'oge na-adịghị anya, anyị ga-ahụ usoro ndị ọzọ na ụdị mobiles iji mee ka 5G jiri ọsọ ọsọ ndị ahụ
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Samsung kwupụtara ọnụ Exynos 880 dị ọnụ ala na 5G
Realme 6S gosipụtara: Ebe etiti ọhụrụ na Helio G90T na igwefoto quad